कैलाशको कुटी: जेल ब्रेकमा सुरुङ
वास्तविक जीवनका आत्मकथा, कथा, निबन्ध जे सुकै होस्, पढ्न रुचि लाग्छ मलाई। त्यही क्रममा नेपालको माओवादी सशस्त्र जनयुद्धमा होमिएका क्रान्तिकारी योद्धाहरुको संस्मरण फेला पारे। त्यसमध्येबाट जेल ब्रेकको कुरालाई प्राथमिकतामा पारेर सरसर्ती पढे। जेल ब्रेकको कुरामा घुमीफिरी उही सुरुङकै कुरा। पहिलो उमाको पुस्तकमा पढेको कुरा झकबहादुरको पुस्तकमा पनि पढे- 'जेल ब्रेकको मार्ग र सफलता उही सुरुङ'। जेल ब्रेकसम्बन्धी उमा र झकबहादुरको दुई किताबमा समेटिएको अन्तरकथाभित्रको उस्तै खालको गाथाको आडमा उभिएर सुरुङ किन र कसरी बनाए भन्ने बारेमा कुरा गरौ आज। यी दुबै एउटै उद्देश्यका निम्ति गरिएको अभ्यास हुन्। साथै उक्त अभ्यासले हात पारेको सफलताको कथा भएकोले धेरैजसो कुरा मेल खान्छ। त्यसै हुनाले पनि उमा भुजेलको अगुवाईमा २०५७ चैत १७ मा गोरखा जेल ब्रेकको सफलताले झकबहादुरहरुको समूहलाई प्रोत्साहन मिल्यो। झकबहादुरको लेखनी छोटा निबन्ध शैलीका छन्। विषयवस्तुको आधारमा उपशिर्षकहरु छुट्टाइएको छ। उमाको लेखनी शुरुदेखि अन्तिमसम्म एकैचोटी बगेको छ।
गोरखा जेल ब्रेकर उमाको सन्दर्भमा अघिल्लै टाँसोमा जानकारी छँदैछ। त्यसैले सुर्खेत जेल ब्रेक झकबहादुरको बारेमा केही भनौ। 'जेल ब्रेकः सुर्खेत जेलब्रेकको अन्तरकथा'का लेखक झकबहादुर वाइसीएलका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा माओवादी तमुवान राज्य समितिका सदस्य हुन्। उनी २०५७ भदौमा गिरफ्तार भइ सुर्खेत जिल्ला कारागारमा बन्दी बनाइए। २०५८ माघ २ मा झकबहादुरसहित ३० जनाको समूह जेल ब्रेक गरी बाहिर निस्केको थियो।
दुश्मनको कब्जामा पुग्नासाथ उम्किने दाउँमा तत्कालिन अवस्था र अनुकूलता हेरी अनेकौ उपायहरु अपनाउँछन् यी क्रान्तिकारी आस्थाका बन्दीहरु। जस्तैः कुनै उपायले जेलबाट अदालत/अस्पताललगायतका लागि बाहिर निस्कँदा पुलिसको घेरा तोड्ने प्रयास गर्नु, जेलभित्रकै भौतिक संरचना (झ्याल)तोड्ने प्रयास गर्नु, डोरीको सहयोगमा पर्खाल नाघ्ने प्रयत्न गर्नु, त्यही खटिएका पुलिसहरुलाई झुक्याउने प्रयत्न गर्नु, खटिएका पुलिसहरुलाई आफ्नो उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्नु। तैपनि जेलबाट बाहिर निस्कने अनुकूलता देखिदैन। जेलभित्र जति पनि आन्दोलन हुन्थे, मागहरु राखिन्थे। अन्तत त्यसको मूल उद्देश्य जेल ब्रेक गर्ने नै रहेको देखिन्छ। त्यस्ता प्रयत्न र कदमहरुबाट जेलभित्रको वातावरणमा केही परिवर्तन आएपनि क्रान्तिकारीहरुको सामुहिक उद्देश्यअनुरुप सफलता मिलेन। किनकी यी उपायहरु अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हुँदाहुँदै पनि एकादुई मात्र जेल बाहिर जान सक्ने, बाहिर निस्कने क्रममा प्रतिरोध गर्ने जमातको कमी हुँदा सबै मारिन सक्ने र जेलभित्रका बन्दीहरु पनि त्यही कारणबाट मारिने बढी सम्भावना रह्यो। सुरुङ निर्माणको थालनी गर्नु दुश्मनको अगाडि मृत्युपत्रमा दस्तखत गर्नु सरह हो। तैपनि कि मृत्यु कि रुचिकर जीवन दुईमध्ये एक 'स्वत प्राप्त हुने', र अर्को 'प्राप्त गर्ने' निर्धक्कपनसहित सुरुङ निर्माण गर्छन् उनीहरु। तब न क्रान्तिकारी!
गोरखा जेल ब्रेकको सन्दर्भमा जम्मा ८ जना महिला बन्दीमध्ये दुईजना अन्य बन्दी थिए- छुट्ने बेला नजिकिदै गरेका। सुरुङ खन्ने महिलामध्ये एकजनाले ती दुईजना बन्दीलाई प्रौढ शिक्षा पढाउने, सिलाईबुनाई सिकाउँने, एकआपसको जीवनको कथाव्यथा बाँड्ने, परिकार पकाउने, राजनीतिक कुराहरुबारे जानकारी दिनेजस्ता काममा ब्यस्त राखेरै दुबैपक्षलाई हुने खालको तरिका अपनाए। तर सुर्खेतको सन्दर्भमा धेरै बन्दीहरु थिए। आस्थाका बन्दीलाई राजनैतिक/वैचारिक आस्था/शक्तिको बलमा, अन्य खालका बन्दीहरुलाई प्रलोभन वा त्यसबाट पनि नभए डर/धम्की समेत दिएरै पनि सुरुङ निर्माण र त्यसको गोपनियतालाई कायम राखेको पढ्न पाइन्छ।
भौगोलिक बनोट, वरपरको सुरक्षा घेराको अवस्था, प्रशासनको निगरानी र व्यवस्थाबारेमा पूर्ण जानकारीपश्चात सुरुङ निर्माणको ठोस खाका र योजना तय गर्नु प्रारम्भिक चरण हो। त्यसपश्चात सुरुङ खन्नको लागि उपकरण जुटाउनु, सुरुङ खन्दाखेरी निस्केको माटो तह लगाउनु, त्यहाँको वातावरण र अवस्थाअनुरुप चरणबद्ध तरिकाले सुरुङ खन्ने काम नियमित राख्नु र अझ मुश्किलको अवस्था भनेको खनेको सुरुङको सुरक्षा र गोपनीयता कायम राख्नु। पटक पटक भेद खुल्ने स्थिति रहँदारहँदै बच्न सफल हुन्छन् उनीहरु। त्यसबेला उनीहरुसँग भएको कला, कसरत र क्षमताको प्रदर्शन गरेर या लुकाएरै आफ्नो कामलाई जोगाए। सुरुङको गोपनियता कायम राख्नलाई निगरानीमा आउने व्यक्तिसँग प्राय राजनीतिक बहसमा उत्रिने र जनकलाकारहरुले गीत संगीतले भुलाउने गर्थे सुर्खेतका बन्दीहरु। गोर्खाका बन्दी महिलाहरुले पुरुषहरुलाई चुनौति दिएर खेल खेल्ने(भलिबल), जीम गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्ने, राजनीतिक कुरामा अल्मल्याउनेजस्ता उपाय अपनाए। खेलको प्रतिस्पर्धामा महिला बन्दीहरुको जितले मनोवैज्ञानिक रुपमा मद्दत पुगेको थाहा हुन्छ।
सुरुङ निर्माण आधा भइसकेपछि बाध्यतावस दुबै जेलमा केही समय सुरुङ खन्ने काम अवरुद्ध भयो। तर अनुकूल परिस्थिति बन्नासाथ पुनः नियमित भयो। सुर्खेतमा धेरै खालका बन्दी एकैठाउँ भएकोले पनि सुरुङबारे बन्दीहरुबाटै कुरा फुत्किने बढी सम्भावना थियो। तर त्यसको निम्ति थुप्रैजना खटे। र सुर्खेतमा सुरुङ निर्माणकै लागि भनेर बाहिरबाट औजार ल्याउने जरुरी परेन। साथै पहिलेदेखि त्यहाँको भूगोलबारे जानकार बन्दीहरु धेरै थिए। गोर्खाको सन्दर्भमा भने बिरामी भएको बहानामा अस्पताल लैजाने माग गरेर बाहिरको भूगोल नियाले।
गोर्खा जेल ब्रेकको सन्दर्भमा उमाको अगुवाईमा कामको बाँडफाँड भएको र त्यसलाई कार्यान्वय गरेको कुरा प्रष्ट रुपमा पढ्न पाइन्छ। बन्दी गृहभित्रबाट सम्भव नदेखिदा तरकारी बारीबाट सुरुङ खने। जनही जिम्मेवारी तोकिन्छ। तर कति फिट तलसम्म खन्ने, कत्रो आकारमा खन्दै तेर्सो लैजाने भन्ने बारेमा ज्ञान नहुँदा केही अप्ठ्यारो परेको पनि उल्लेख छ। घरपरिवारका बुबालगायतकाहरुका अनुभव या कुरा सुनेको भरमा सुरुङ खन्दै लगे उनीहरुले। प्रतिकूल अवस्था आउनासाथ शतर्क हुनलाई कोड भाषा बनाए। सेनाको निगरानी हुने ठाउँमा सेन्ट्री दिने एकजना सीपमूलक काम गर्दै, भित्रपट्टीको बन्दी साथीहरुलाई अलमलाउने एकजना दिनहुँ विविध विषय या उपाय निकाल्दै, सुरुङ खनिदै गरेको र त्यस वरपरको अवस्थाको निगरानी गर्ने एकजना तरकारी र बारीको हेरचाह गर्दै, सुरुङ खन्ने एकजना, खनिएको माटो तह लगाउने एकजना। पछि एकजना थपिएपछि सेनाको निगरानीमा दुईजना खटे। भित्रको महिला बन्दीहरुलाई भुल्याउने काममा भने के विषयले भुल्याउने भन्ने पिरलो पनि परेको बुझिन्छ। तर पछि भुल्याउने व्यक्ति परिवर्तन गरेर र दिनदिनैको अनुभवकै आधारमा त्यो काम फत्ते गरिएको देखिन्छ।
तरकारी अड्याउने बासको टुक्राद्वारा सुरुङ खन्ने कामको शुरुआत गरे उनीहरुले। त्यसपछि तरकारी, फूल रोप्ने/गोड्ने, ढल सफा गर्नेलगायतका नाममा सामाग्रीको माग गर्दै सुरुङ निर्माणमा चाहिने सामग्री/औजार बटुल्न थाले। बाहिरी रुपमा हेर्दा अत्यन्तै स-साना मानिने कुराहरुप्रति पनि निकै सजग रहँदै उनीहरु आफ्नो काममा तल्लीन रहे। तत्कालीन अवस्था हेरी बीच-बीचमा समस्या सृजना गर्दै र माग राख्दै आन्दोलन गर्दै प्रशासनलाई अल्मल्याए। हुन त त्यसैले अवरोध पनि खडा गर्थ्यो बेला बेलामा। त्यसबाहेक त्यहाँ खटेका सेनाहरुसँग चलाखीपूर्वक जानकारी थुत्दै, सहयोग लिदै अघि बढे। जसरी हुन्छ सुरुङबाट बाहिर ननिस्कुञ्जेलसम्म सुरुङबारेमा अरुको ध्यान नपुग्ने वातावरण सृजना गरिरहे।
त्यस्ता कुराहरु स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको भएपनि सुरुङ खन्दाखेरी त्यहाँभित्र कसरी उज्यालो पारिन्थ्यो, श्वास लिन पर्याप्त अक्सिजन हुन्थ्यो हुन्नथ्यो भन्नेबारेमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन। सुरुङको आकार १ जना मात्रै अट्ने र कतै कतै घिस्रिएर मात्रै छिरिने पनि भनिएको छ। सानो आकारभित्र रहेर सुरुङ खनीरहनु र खन्दा निस्केको ढुंगा माटोलाई तह लगाउनु चानचुने कुरा पक्कै हैन, त्यसमाथि एकजना (कमला)कै अथक र निरन्तर काम थियो सुरुङभित्र पसेर खन्ने भन्ने कुरा पुस्तकमा पढिन्छ। यस्ता चुनौतीपूर्ण कठिनाईलाई सहजरुपमा कसरी पार गर्न सके होलान्? अनि यत्तिका काम जेलभित्रै गरिरहँदासम्म थाहा नपाउने हाम्रा सुरक्षाकर्मी/प्रशासनको व्यवस्था र निगरानी कस्तो थियो होला?
सुर्खेत जेल ब्रेकको सन्दर्भमा बाहिरबाट भन्दा भित्रैबाट सुरुङ खन्ने अनुकूलताअनुरुप २ बन्दी (मिर्गीका रोगी)कै कोठाबाट सुरुङ खनियो। उनीहरुको रोगको कारणले त्यहाँ धेरै खोजतलास नगरिने हुनाले त्यो कोठा छनौटमा पारियो। ८ फिटको खाडल खनेपछि सुरुङलाई तेर्सो दिशामा लगियो। अक्सिजनको कमीले गर्दा धेरैबेर सुरुङभित्र बस्न नसिकने हुँदा पालैपालो गरि सुरुङभित्र पस्दै खने। सुरुङमा काम गर्नलाई उज्यालो पार्नको लागि भित्रै बिजुलीको बल्ब जडान गरिएको र एकैचोटि दुईजना सम्म पस्न मिल्ने सुरुङ बनाइएको थियो। खनेर निकालिएको माटोलाई चामलको बोरामा हाल्दै सिलिङमा बाँधेर राख्ने, भित्रै हलमा राख्ने (जसले गर्दा ओछ्यानको भुई २ इञ्च माथि उठेको उल्लेख छ), ढुंगा चाहि मिलेसम्म बाहिरै चौरमा राख्ने वा सुरुङभित्रै मिलाएर राख्ने। यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदादिँदै सफलता हात पर्यो। सुरुङको अन्तिम बिन्दु (जेल बाहिरको भूगोलमा पाइला राख्ने बिन्दु)लाई जेल ब्रेक गरेर निस्किदा निस्किदै खनिएको थियो। र अन्तिममा उनीहरु जेल तोडेर भाग्न सफल भए। सुर्खेत जेल ब्रेकमा साथ दिने महिला बन्दीहरु अलग्गै कम्पाउण्डमा राखिने हुनाले बाहिर निस्कन सकेनन्। गोर्खा जेल ब्रेकमा पनि पुरुष बन्दीहरु निस्कने अनुकूलता मिलेन।
Posted by कैलाश at 1:10 PM
यसपाला भने तपाईको टाँसो पढ्दा अली-अली नै भए पनि 'म पनि त्यहिँ नै थीएँ कि' जस्तो भयो।
यसरी विना अक्सिजन सुरुङ खन्ने र त्यहाबाट निक्लेको ढुङ्गा माटो तह लगाउने कार्य पक्कै पनि साहसीक कार्य हो, तर पढ्दैं जाँदा (जत्ति सुकै सानो भएपनि मानिस छिर्न सक्ने) ८-९ फिट गहिरो र जेलको सिमाना बाहिर सम्म पुग्ने सुरुङ तयार हुँदासम्म सुरक्षा निकायलाई भनक समेत नहुनुले हाम्रा सुरक्षा निकाय कत्ती गतिछाडा तरिकाले काम गर्दा रहेछन भन्ने पनि थाहा पाएँ।
कैलाश जी आफुले पढेका र बुझेका कुराहरु राम्ररी शेयर गर्नु भाको मा धन्यवाद । जेल ब्रेकर को सहासिक काहानीहरु सराहनीय लागे मलाई पनि तर अहिलेको माओवादीरुको ढर्रा र हैकम बाद .... लाइ सुधारेर गरे बेस हुने थियो जस्तो लाग्छ ।
हो पुलामी सर, माओवादीहरु एस्तो र एतिको शाहसिक काम गरेर भागन सफल हुनेहरु अहिले यो शिबिर भित्र बसेर देशको ढुकुटी खाइरहनुको साटो फेरी एस्तै जनताको मन जित्न सक्ने काम जस्तै नहर बाटो घाटो खनेर देखाउन सक्दैनन र भन्या।